Iye zvino unogona kutenga Apple Watch Nike + kubva ku € 306,97 | Ndinobva mac
Iye zvino unogona kutenga Apple Watch Nike + kubva ku € 306,97
Icho chiri pamusoro chipo chazvino chakatangwa chaicho paNike webhusaiti uye iyo inotipa madhora anodarika zana emauro mune yega yega mavhezheni maviri aripo eiyo wachi, iyo 100 uye iyo 38 mm. KuNike vari kumhanyisa kusimudzira kwenguva yakati wandei saka usamirira kwenguva yakareba kuti utenge kana wanga uchironga kuwana imwe yeaya Apple Watch Nike +.
Tinogona kutaura kuti iyo Nike + modhi iri chaizvo Apple Watch Series 2 modhi pamwe nekumwe kugadzirisa kana mutsauko uchienzaniswa neyakajairika vhezheni yeiyo Series 2. Apple yakazvivhura munaGunyana 2016 uye kunyangwe chiri chokwadi kuti hatisi panguva yakanaka yekutenga Apple Watch nekuda kwerunyerekupe rune simba runotaura nezvekuvandudzwa kwechigadzirwa, iyi Apple Watch Nike + hapana mubvunzo kuti inogona kunge iri yakanaka kutenga kune vazhinji vedu.
Vese avo vasingade kumirira kuti vatenge Apple Watch kana kungoti havana basa kuti mukati memwedzi vanogona kuburitsa modhi nyowani, ichi dhisikaundi chine simba chairo rekusafunga nezvazvo kaviri uye enda kunotenga.
Sezvauri kuona kubva pamitengo, iyo 42mm chishandiso inoderedzwa ne141 euros uye iyo 38mm modhi iri 132 euros yabviswa. Iyi Apple Tarisa Nike + chishandiso chakakwana chevadi vemitambo uye kunyanya kune vamhanyi, inowedzera yakasarudzika Nike Sport tambo, inosanganisira GPS, skrini yakapetwa kaviri inopenya, kushora kwemvura kusvika pamamita makumi mashanu uye ine simba mbiri-musimboti processor yezvazvino. shanduro dzewatch.
Zvinoita sekunge isu kutenga kwakanaka chaizvo tichifunga kuti hapana kana gore rakapfuura kubva pakuratidzwa kwayo uye kuti zviri pachena tichava neawa kwechinguva. PaNike webhusaiti iwe unowana zvese zvakadzama uye mukana wee kuita kutenga neiyi yakakosha dhisikaundi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iye zvino unogona kutenga Apple Watch Nike + kubva ku € 306,97
Consumer Reports inomira ichikurudzira kutengwa kweMicrosoft Surface makomputa